ပြိုမတေို့ ရှေးခယျြတဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျက ပြိုမတေို့အကွောငျးကို အမြားကွီးဖျောပွနေ - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge ပြိုမတေို့ ရှေးခယျြတဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျက ပြိုမတေို့အကွောငျးကို အမြားကွီးဖျောပွနေ
မိနျးကလေးတိုငျးမှာ နှုတျခမျးနီနဲ့ ပတျသတျလာရငျ အနှဈသကျဆုံး အရောငျလေးတှရှေိကွပါတယျနျော။ နှုတျခမျးနီအရောငျတှေ အမြားကွီး ဝယျထားပမေယျ့ နှုတျခမျးနီဆိုးခါနီးရငျ ကိုယျအနှဈဆကျဆုံး တဈရောငျတညျးကိုပဲ ရှေးခယျြမိမှာပါ။ သုတသေန စမျးသပျခကျြတှအေရ သငျ ဆိုးထားတဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျမှတဆငျ့ သငျ့အကွောငျးကို ခနျ့မှနျးလို့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျရပမေယျ့ ပြိုမတေို့ မိတျကပျအိတျထဲက နှုတျခမျးနီအရောငျဟာ ပြိုမတေို့ ဘယျလိုလူမြိုးဖွဈကွောငျး အမြားကွီးဖျောပွနပေါတယျ။
အနီရောငျဟာ မြားသောအားဖွငျ့ စိတျအားထနျသနျမှုကို ကိုယျစားပွုပွီး လိမ်မျောရောငျက ရှငျလနျးတတျကွှမှုကို ကိုယျစားပွုသကဲ့သို့ မတူညီတဲ့ အရောငျအသှေးတှမှော မတူညီတဲ့ အဓိပ်ပာယျတှေ ရှိကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပြိုမတေို့ အဆိုးမြားတဲ့ နှုတျခမျးနီအရောငျလေးက ပြိုမတေို့အကွာငျးကို ဘယျလိုဖျောပွနသေလဲဆိုတာ သိရှိစဖေို့ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
သငျမှာ ဟာသအမွငျရှိပွီး သငျ့အားလပျခြိနျကို သူငယျခငျြးတှေ၊ မိတျဆှအေသဈတှနှေငျ့ တှဆေုံ့ပွီး အခြိနျကုနျဆုံးတတျပါတယျ။ ပငျကိုသဘာဝကိုက ပြျောပြျောနတေတျသော ကိုယျရညျကိုယျသှေးရှိတာကွောငျ့ လူတှရေဲ့ အာရုံစိုကျမှုကို အမွဲတမျးရရှိပါတယျ။ လူတှကေ အကောငျးမွငျတတျမှုနှငျ့ သငျ့ရဲ့ပွကျလုံးတှကွေောငျ့ သငျ့ကိုခဈြကွပါတယျ။
စိနျချေါမှုအသဈတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရတဲ့အခါ သငျဟာ ရဲရငျ့ပွီး အကွောကျတရားကငျးပါတယျ။ သငျ့အတှကျ အရေးပါဆုံးအရာတဈခုက သငျ့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့၊ သငျ့အိမျမကျတှကေိုအကောငျအထညျဖျောဖို့ မဆုတျမနဈ ကွိုးစားတတျသူဖွဈပါတယျ။
သငျဟာ သငျ့သူငယျခငျြးအုပျစုထဲမှာ စောငျ့ရှောကျမှု ပေးတတျသူ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ တဈစုံတဈယောကျမှာ ပွဿနာတဈခုရှိတဲ့အခါတိုငျး သူတို့ကို နားလညျမှုနှငျ့ နှဈသိမျ့မှုပေးတတျသူ ဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ တခါတရံ စိတျခံစားမှုနှငျ့ ကွုံလာတဲ့အခိုကျမှာ မြှဝခေံစားတတျပွီး အရမျးကွငျနာတတျသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ စိတျနသေဘောထား နူးညံ့တဲ့ မိနျးကလေးဖွဈတာကွောငျ့ လူတှကေ သငျ့ရဲ့ အကဲဆတျမှုကို နားလညျပေးကွပါတယျ။
ဘဝမှာ ရိုးရှငျးတဲ့အရာတှကေို နှဈသကျသူတဈဦးပါ။ သငျ့ရဲ့ တနျဖိုးအထားဆုံးက ရိုးသားမှုဖွဈပွီး သူစိမျးတှနေဲ့တောငျ အပျေါယံ ဟနျဆောငျမှုတှေ မလုပျပါဘူး။ ပငျကိုစိတျရငျးနှငျ့ ဆကျဆံတတျပါတယျ။ သငျရဲ့ အေးတိအေးစကျနိုငျမှုနှငျ့ ကြိုးကွောငျးဆငျခွငျတတျတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေးတှကွေောငျ့ သငျ့သူငယျခငျြးမြားက သငျ့ကို ခဈြကွပါတယျ။
သငျ့အတှကျ မိသားစုက အမွဲတမျး ပထမဦးစားပေးပါ။ မိသားစုနှငျ့အတူ အခြိနျကုနျရတာကို ပြျောရှငျသူဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ ထုံးထမျးစဉျလာကို လေးစားသူတဈယောကျဖွဈပွီး ပွနျလညျတှေးတော့ကွညျ့ဖို့ အမှတျတရကောငျးတှေ ဖနျတီးရတာကို ပြျောမှသေူ့ဖွဈပါတယျ။ ဖကျရှငျ၊ ဂီတနှငျ့ ရုပျရှငျ အဟောငျးတှကေို ဘာ့ကွောငျ့ ဝါသနာပါသလဲဆိုတော့ သငျဟာ အတိတျကို လှမျးဆှတျရတာ ခဈြမွတျနိုးသူဖွဈလို့ပါပဲ။
သငျဟာ ဖွဈခငျြတာကို မရရအောငျ လုပျတတျသူ တဈဦးပါ။ သငျ့ရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက ခိုငျမာတာကွောငျ့ တခြို့က သငျ့ကို ခေါငျးမာတယျလို့ ပွောပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ရဲ့ ပငျကိုသဘာဝကိုက ခေါငျးဆောငျသူအဖွဈ မှေးဖှားလာတာကွောငျ့ လူတှကေ သငျ့စကားကို နားထောငျပွီး လိုကျနာစလေိမျ့မယျ့ အားသာမှု တဈခုရှိပါတယျ။ သငျဟာ ယှဉျပွိုငျမှုကို ပြျောမှသေူ့ဖွဈပွီး အောငျမွငျမှုတဈခုထကျ တခွားဘာမှ ရယူမယျ့သူ မဟုတျပါဘူး။
သငျ့ဟာ ကိုယျ့အကွောငျးကို ဘယျသူတှေ ဘာပွောပွော ဂရုမစိုကျတတျသူပါ။ ကိုယျ့ဘဝကို ကိုယျ့အတှကျသာ ရှငျသနျပွီး တတျနိုငျသမြှ အမှီခိုကငျးကငျး နရေဖို့ကို ကွိုးစားပါတယျ။ စညျးမဉျြးတှကေို မနှဈသကျသူဖွဈသလို လူတှနေဲ့ ရောရောနှောနှော နရေတာကို သဘောမကပြါဘူး။ သငျ့မှာ အတှေးအချေါကောငျးတှရှေိပွီး သငျ့ပတျဝနျးကငျြကမ်ဘာကွီးနှငျ့ ပတျသကျပွီး မေးခှနျးထုတျလရှေိ့ပါတယျ။
သငျဟာ တခွားသူတှရေဲ့ မကျြစိထဲမှာ ထူးခွားပွီး ဖနျတီးမှု အလှနျအားကောငျးတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျပါ။ သငျ့ဟာ ကိုယျ့စိတျကွိုကျလုပျတတျသူဖွဈတာကွောငျ့ တခါတရံ လူတှအေမွငျမှာ နားလညျဖို့ ခကျခဲသူဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ ရှငျလနျးတတျကွှသူဖွဈပွီး တမူထူးခွားတဲ့ ပငျကိုစရိုကျရှိပါတယျ။ သငျဟာ အတှေးအချေါကို နညျးနညျး ရှတေ့နျးတငျတတျသူ ဖွဈကောငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ပြိုမတေို့ကော ဘယျနှုတျခမျးနီအရာငျလေးတှကေို အကွိုကျဆုံးလဲ? ယခုဖျောပွထားတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှနေဲ့ ထပျတူကသြလားဆိုတာ မြှဝပေေးပါဦးနျော။
ပျိုမေတို့ ရွေးချယ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်က ပျိုမေတို့အကြောင်းကို အများကြီးဖော်ပြနေ
မိန်းကလေးတိုင်းမှာ နှုတ်ခမ်းနီနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် အနှစ်သက်ဆုံး အရောင်လေးတွေရှိကြပါတယ်နော်။ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်တွေ အများကြီး ဝယ်ထားပေမယ့် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးခါနီးရင် ကိုယ်အနှစ်ဆက်ဆုံး တစ်ရောင်တည်းကိုပဲ ရွေးချယ်မိမှာပါ။ သုတေသန စမ်းသပ်ချက်တွေအရ သင် ဆိုးထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်မှတဆင့် သင့်အကြောင်းကို ခန့်မှန်းလို့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ပျိုမေတို့ မိတ်ကပ်အိတ်ထဲက နှုတ်ခမ်းနီအရောင်ဟာ ပျိုမေတို့ ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ကြောင်း အများကြီးဖော်ပြနေပါတယ်။ အနီရောင်ဟာ များသောအားဖြင့် စိတ်အားထန်သန်မှုကို ကိုယ်စားပြုပြီး လိမ္မော်ရောင်က ရွှင်လန်းတတ်ကြွမှုကို ကိုယ်စားပြုသကဲ့သို့ မတူညီတဲ့ အရောင်အသွေးတွေမှာ မတူညီတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပျိုမေတို့ အဆိုးများတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအရောင်လေးက ပျိုမေတို့အကြာင်းကို ဘယ်လိုဖော်ပြနေသလဲဆိုတာ သိရှိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သင်မှာ ဟာသအမြင်ရှိပြီး သင့်အားလပ်ချိန်ကို သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေအသစ်တွေနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အချိန်ကုန်ဆုံးတတ်ပါတယ်။ ပင်ကိုသဘာဝကိုက ပျော်ပျော်နေတတ်သော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိတာကြောင့် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို အမြဲတမ်းရရှိပါတယ်။ လူတွေက အကောင်းမြင်တတ်မှုနှင့် သင့်ရဲ့ပြက်လုံးတွေကြောင့် သင့်ကိုချစ်ကြပါတယ်။
စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ သင်ဟာ ရဲရင့်ပြီး အကြောက်တရားကင်းပါတယ်။ သင့်အတွက် အရေးပါဆုံးအရာတစ်ခုက သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့၊ သင့်အိမ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မဆုတ်မနစ် ကြိုးစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ သင့်သူငယ်ချင်းအုပ်စုထဲမှာ စောင့်ရှောက်မှု ပေးတတ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတစ်ခုရှိတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ကို နားလည်မှုနှင့် နှစ်သိမ့်မှုပေးတတ်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ တခါတရံ စိတ်ခံစားမှုနှင့် ကြုံလာတဲ့အခိုက်မှာ မျှဝေခံစားတတ်ပြီး အရမ်းကြင်နာတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ စိတ်နေသဘောထား နူးညံ့တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်တာကြောင့် လူတွေက သင့်ရဲ့ အကဲဆတ်မှုကို နားလည်ပေးကြပါတယ်။
ဘဝမှာ ရိုးရှင်းတဲ့အရာတွေကို နှစ်သက်သူတစ်ဦးပါ။ သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးအထားဆုံးက ရိုးသားမှုဖြစ်ပြီး သူစိမ်းတွေနဲ့တောင် အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှုတွေ မလုပ်ပါဘူး။ ပင်ကိုစိတ်ရင်းနှင့် ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။ သင်ရဲ့ အေးတိအေးစက်နိုင်မှုနှင့် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းများက သင့်ကို ချစ်ကြပါတယ်။
သင့်အတွက် မိသားစုက အမြဲတမ်း ပထမဦးစားပေးပါ။ မိသားစုနှင့်အတူ အချိန်ကုန်ရတာကို ပျော်ရွင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ထုံးထမ်းစဉ်လာကို လေးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည်တွေးတော့ကြည့်ဖို့ အမှတ်တရကောင်းတွေ ဖန်တီးရတာကို ပျော်မွေ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ရှင်၊ ဂီတနှင့် ရုပ်ရှင် အဟောင်းတွေကို ဘာ့ကြောင့် ဝါသနာပါသလဲဆိုတော့ သင်ဟာ အတိတ်ကို လွမ်းဆွတ်ရတာ ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်လို့ပါပဲ။
သင်ဟာ ဖြစ်ချင်တာကို မရရအောင် လုပ်တတ်သူ တစ်ဦးပါ။ သင့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က ခိုင်မာတာကြောင့် တချို့က သင့်ကို ခေါင်းမာတယ်လို့ ပြောပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ ပင်ကိုသဘာဝကိုက ခေါင်းဆောင်သူအဖြစ် မွေးဖွားလာတာကြောင့် လူတွေက သင့်စကားကို နားထောင်ပြီး လိုက်နာစေလိမ့်မယ့် အားသာမှု တစ်ခုရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပျော်မွေ့သူဖြစ်ပြီး အောင်မြင်မှုတစ်ခုထက် တခြားဘာမှ ရယူမယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်ဟာ ကိုယ့်အကြောင်းကို ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ဂရုမစိုက်တတ်သူပါ။ ကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ့်အတွက်သာ ရှင်သန်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ အမှီခိုကင်းကင်း နေရဖို့ကို ကြိုးစားပါတယ်။ စည်းမျဉ်းတွေကို မနှစ်သက်သူဖြစ်သလို လူတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော နေရတာကို သဘောမကျပါဘူး။ သင့်မှာ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေရှိပြီး သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။
သင်ဟာ တခြားသူတွေရဲ့ မျက်စိထဲမှာ ထူးခြားပြီး ဖန်တီးမှု အလွန်အားကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပါ။ သင့်ဟာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လုပ်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့် တခါတရံ လူတွေအမြင်မှာ နားလည်ဖို့ ခက်ခဲသူဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ ရွင်လန်းတတ်ကြွသူဖြစ်ပြီး တမူထူးခြားတဲ့ ပင်ကိုစရိုက်ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ အတွေးအခေါ်ကို နည်းနည်း ရှေ့တန်းတင်တတ်သူ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပျိုမေတို့ကော ဘယ်နှုတ်ခမ်းနီအရာင်လေးတွေကို အကြိုက်ဆုံးလဲ? ယခုဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ ထပ်တူကျသလားဆိုတာ မျှဝေပေးပါဦးနော်။
Previous articleTech for Women Safety ခေါငျးစဉျနဲ့ Startup Challenge 2019 မှာ “SafeMe Application” ကိုတီထှငျပွီး အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ အသငျးပျေါထှကျ
Next articleယနခေ့တျေလူတှေ ပွုလုပျကွတဲ့ ထူးထူးခွားခွား ပလတျစတဈဆာဂရြီမြား